2 Okwu Jehova wee ruo m ntị,+ si:
2 “Gaa jiri oké olu gwa Jeruselem, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru:+ “Echetara m nke ọma obiọma* i nwere n’oge ị bụ nwa agbọghọ+ na ịhụnanya i nwere n’oge m kwere nkwa ịlụ gị,+ na otú i si na-eso m n’ala ịkpa, n’ala a na-aghaghị mkpụrụ ọ bụla.+
3 Izrel bụ ihe dị nsọ nye Jehova,+ mkpụrụ mbụ nke mịịrị Ya.”’+ ‘Ndị ọ bụla nke na-eripịa ya ga-eme onwe ha ndị ikpe mara.+ Ọdachi ga-adakwasịkwa ha,’ ka Jehova kwuru.”+
4 Nụrụnụ okwu Jehova, gị ụlọ Jekọb+ na unu ezinụlọ niile nke ụlọ Izrel.+
5 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Gịnị bụ ihe na-ezighị ezi nna unu hà hụrụ n’ebe m nọ+ nke mere ha ji nọrọ m n’ebe dị anya,+ ha wee na-eso arụsị na-abaghị uru,+ ha onwe ha wee ghọọ ndị na-abaghị uru?+
6 Ha asịghị, ‘Olee ebe Jehova nọ, bụ́ Onye si n’ala Ijipt kpọpụta anyị,+ Onye duuru anyị gafere ala ịkpa, gafere mbara ọzara+ na olulu, gafere ala mmiri na-adịghị+ na ala oké ọchịchịrị,+ gafere ala mmadụ na-agafetụbeghị, nke mmadụ na-ebitụbeghị?’
7 “M wee kpọbata unu n’ala e nwere ubi mkpụrụ osisi, ka unu rie ihe o mepụtara na ihe ọma ndị dị na ya.+ Ma unu batara merụọ ala m; unu mekwara ka ihe nketa m bụrụ ihe arụ.+
8 Ndị nchụàjà asịghị, ‘Olee ebe Jehova nọ?’+ Ndị iwu dị n’aka amaghị m;+ ndị ọzụzụ atụrụ mebikwara iwu m,+ ọbụna ndị amụma buru amụma n’aha Bel,+ ọ bụkwa ndị na-agaghị abara ha uru ọ bụla ka ha sooro.+
9 “‘Ya mere, mụ na unu ga-aba n’ikpe ọzọ,’+ ka Jehova kwuru, ‘mụ na ụmụ ụmụ unu ga-abakwa n’ikpe.’+
10 “‘Ma, gaanụ n’ala ndị dị n’ụsọ osimiri nke ndị Kitim+ wee hụrụ. Ee, ziganụ ozi ọbụna na Kida+ ka unu wee tụlee nke ọma mata ma ụdị ihe a ò metụla.+
11 Ò nweela mba ji ihe ndị na-abụghị chi+ gbanwere chi ha?+ Ma ndị m ejiriwo ihe na-apụghị ịbara ha uru gbanwere otuto m.+
12 Gị eluigwe, kporopụ anya n’ihi ihe a; ka akpata oyi wụọkwa gị n’ihi oké egwu,’ ka Jehova kwuru,+
13 ‘n’ihi na ndị m mere ihe abụọ dị njọ: Ha ahapụwo mụ onwe m,+ bụ́ isi iyi nke mmiri na-enye ndụ,+ ka ha wee gwuoro onwe ha olulu, olulu gbawara agbawa, ndị na-apụghị ichedo mmiri.’
14 “‘Izrel ọ̀ bụ onye na-eje ozi,+ ka ọ̀ bụ ohu a mụrụ n’ezinụlọ? Gịnị mere o ji bụrụ onye a na-ebukọrọ ihe ya?
15 Ụmụ ọdụm tojuru etoju na-ebigbọ ya;+ ha ebigbọwo.+ Ha wee mee ka ala ya bụrụ ihe ijuanya. Ha agbawo obodo ya niile ọkụ, nke mere na ọ dịghị onye bi na ha.+
16 Ụmụ Nọf+ na ụmụ Tapanis+ na-eri opu isi gị.+
17 Ọ́ bụghị gị mere onwe gị ihe a site n’ịhapụ Jehova bụ́ Chineke+ gị n’oge o du gị na-eje n’ụzọ?+
18 Gịnị mere i ji nwee mmasị n’ụzọ e si aga Ijipt+ ka i wee ṅụọ mmiri Shaịhọ?+ Gịnịkwa mere i ji nwee mmasị n’ụzọ e si aga Asiria+ ka i wee ṅụọ mmiri Osimiri Yufretis?
19 Ihe ọjọọ gị kwesịrị ịgbazi gị,+ omume ekwesịghị ntụkwasị obi gị kwesịrị ịdọ gị aka ná ntị.+ Mara, ya dookwa gị anya na ọ bụ ihe ọjọọ, bụrụkwa ihe dị mwute,+ na ị hapụrụ Jehova bụ́ Chineke gị, ị tụghịkwa m ụjọ,’+ ka Ọkaakaa+ Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru.
20 “‘N’ihi na m kụrisịrị yok gị mgbe dị anya gara aga;+ m dọbisịrị agbụ e kere gị. Ma ị sịrị: “Agaghị m ejere gị ozi,” n’ihi na ọ bụ n’ugwu ọ bụla dị elu nakwa n’okpuru osisi ọ bụla jupụtara n’akwụkwọ ndụ+ ka ị na-edina jaghee ụkwụ+ gị wee na-agba akwụna.+
21 Ma mụ onwe m kụrụ gị dị ka ezi mkpụrụ vaịn uhie,+ ọ bụ naanị ezi mkpụrụ vaịn. Oleezi otú i si gbanwee n’ebe m nọ wee ghọọ alaka mebiri emebi nke osisi vaịn si ebe ọzọ?’+
22 “‘Ọ bụrụgodị na i were akanwụ na ncha dị ukwuu saa ahụ́,+ njehie gị ga-abụ ntụpọ n’ihu m,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.
23 Gịnị mere ị ga-eji sị, ‘Emerụghị m onwe m.+ Esoghịkwa m Bel’?+ Lee ụzọ gị nke dị na ndagwurugwu.+ Mara ihe i mere. Nwa agbọghọ kamel nke dị garagara, nke na-agbagharị n’ụzọ ya n’efu;
24 ịnyịnya ọhịa+ nke ala ịkpa maara ahụ́, nke agụụ na-agụ mkpụrụ obi ya, nke na-ekukwa ume ọkụ ọkụ;+ ònye pụrụ ịchụghachi ya azụ mgbe ọ chọrọ ka oké gbaa ya? Ike agaghị agwụ ndị niile na-achọ ya. Mgbe ọnwa ya ruru, ha ga-achọta ya.
25 Kwụsị ịgba ụkwụ ọtọ, kwụsịkwa ime ka akpịrị na-akpọ gị nkụ.+ Ma ị sịrị, ‘Ọ baghị uru!+ Ee e, kama ahụrụ m ndị mba ọzọ n’anya,+ ọ bụ ha ka m ga-eso.’+
26 “Dị ka ihere si eme onye ohi mgbe e jidere ya, otú ahụ ka ihere meworo ndị ụlọ Izrel,+ ha onwe ha, ndị eze ha, ndị isi ha na ndị nchụàjà ha na ndị amụma ha.+
27 Ha na-asị osisi, ‘Ị bụ nna m,’+ sịkwa nkume, ‘Ọ bụ gị mụrụ m.’ Ma, ọ bụ m ka ha gbakụtara azụ, ha echeghị ihu n’ebe m nọ.+ Mgbe ọdachi dakwasịrị ha, ha ga-asị, ‘Bilie zọpụta anyị!’+
28 “Ma olee ebe chi ndị i meere onwe gị nọ?+ Ka ha bilie ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịzọpụta gị n’oge ọdachi gị.+ N’ihi na dị ka obodo gị dị ọtụtụ, otú ahụ ka chi gị dị ọtụtụ, gị Juda.+
29 “‘Gịnị mere unu ji na-esesa m okwu?+ Gịnị mere unu niile ji mebie iwu m?’+ ka Jehova kwuru.
30 N’efu ka m tiworo ụmụ unu ihe.+ Ha anaraghị ịdọ aka ná ntị.+ Mma agha unu eripịawo ndị amụma unu dị ka ọdụm nke na-ebibi ihe.+
31 Ọgbọ a, tụleenụ okwu Jehova.+
“Àghọworo m Izrel ala ịkpa nkịtị,+ ka m̀ ghọworo ha ala gbara oké ọchịchịrị? Gịnị mere ndị a bụ́ ndị m ji sị, ‘Anyị awagharịwo. Anyị agaghị abịakwute gị ọzọ’?+
32 Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọ̀ pụrụ ichefu ihe o ji achọ mma, nwaanyị a na-alụ ọhụrụ ọ̀ pụrụ ichefu ákwà ọ na-eke n’obi? Ma ndị m echefuwo m ọtụtụ ụbọchị.+
33 “Nwaanyị, gịnị mere i ji na-edozi ụzọ gị ka e wee hụ gị n’anya? Ya mere, i mewo ka ụzọ gị jọọ nnọọ njọ.+
34 Ọ bụkwa n’uwe mwụda gị ka a hụrụ ọbara nke mkpụrụ obi+ ndị ogbenye aka ha dị ọcha.+ Ọ bụghị n’ihi na ha nọ na-awaba n’ụlọ, ma, ọ bụ n’uwe gị dum ka m hụrụ ya.+
35 “Ma ị sịrị, ‘Aka m dị ọcha. N’ezie, iwe ọ na-eweso m adajụwo.’+
“Lee, mụ na gị ga-aba n’ikpe n’ihi na ị sịrị, ‘Emehieghị m.’+
36 Gịnị mere i ji were ịgbanwe ụzọ gị dị ka obere ihe?+ Ihere Ijipt ga-emekwa gị,+ dị nnọọ ka ihere Asiria mere gị.+
37 Ọ bụkwa nke a ga-eme ka i buru aka n’isi,+ n’ihi na Jehova ajụwo ihe bụ́ obi ike gị, ha agaghị eme ka ihe gaziere gị.”
^ Jer 2:2*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D24%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl